Aaron Ramsey wuxuu dalbanayaa mushaar kordhin ka hor inta uusan saxiixin qandaraaska cusub - Jubbaland TV
Aaron Ramsey wuxuu dalbanayaa mushaar kordhin ka hor inta uusan saxiixin qandaraaska cusub
By admin February 25, 2018 429
Aaron Ramsey ayaa lagu soo waramayaa inuu dalab fiican ka helay Arsenal ka hor inta uusan qandaraas cusub u saxiixin Emirates Stadium.
Gunners ayaa la fahamsan yahay inay wadahadalo furan kula bilowday ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Wales horaantii bishaan isagoo sii joogaya xilli ciyaareedka soo socda.
Sida laga soo xigtay jariiradda The Times, 27 jirkaan ayaa dib u dhigaya inuu qalinka ku duugo warqad sida uu doonayo inuu kordhiyo mushaharka uu haatan ku qaadanayo 110 kun ginni isbuucii.
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay hore heshiis gacanta ugu galisay xidigeeda Mesut Ozil qandaraaskiisa, iyadoo labadoodaba ay sidoo kale mushahar gaar ah siineyso marka ay soo galaan wareegyada ugu dambeeya ee heshiiska.
Ramsey ayaa Arsenal u joogay tan iyo 2008dii, isagoo saftay kulankiisii ugu horeysay ee kooxdiisii ka hor inta uusan ciyaaryahan kale oo haatan ciyaarin.
The post Aaron Ramsey wuxuu dalbanayaa mushaar kordhin ka hor inta uusan saxiixin qandaraaska cusub appeared first on Wararka Ciyaaraha.
Hordhaca :Manchester united vs Bules united oo ay qasab ku tahay in badisaa Bules oo ubahan in ay ku soo laabto wadada guulaha iyo dagaalka conte iyo jose
Nemanja Matic Oo Amaanay Xidiga Romelu Lukaku Ka Hor Kulanka Chelsea
Barcelona oo ku dhawaaqday safkeeda, xilli Sergio Busquets lagu soo daray kulankaan
Liiska Xiddigaha Xulka qaranka Nigeria ee Koobka Aduunka oo,,,
Gacalisada Gareth Bale oo Ninkeeda ku qalqaalinaysa in uu ku laabto Premier League, gaar ahaan